Izindaba ezimfishane, indlela efanele yokusebenzisa ubuciko bemibhalo | Izincwadi Zamanje
Izindaba ezimfishane: ziyini, izici nokuthi ungayibhala kanjani eyodwa
UJuan Ortiz | | inganekwane yesayensi, Izinhlobo, Literatura, Izindaba
Tindzaba letimfisha tindzaba letimfisha kakhulu lapho kukhulunywa khona ngesihloko sinye. Ngokuvamile, abanamikhawulo endabeni efanele futhi basukela ezindabeni eziqanjiwe kuya kumathekisthi endawo ephakamisayo noma engajwayelekile. Izindatshana ezincane zihlala zixhomeke ezindabeni ezingaphezulu kwemvelo noma izincazelo zeqiniso elihlaba umxhwele.
Kunoma ikuphi, izakhi ezimbili eziyisisekelo ezikulesi sakhi sombhalo zingezokuqala nokuqina. Ngale ndlela, indaba emfushane izoba nekhono lokumangaza noma lokuthwebula umfundi (futhi ngeke kube ukulandisa "okukhohlakala kalula"). Lokho wukuthi, umbhali kumele abe nekhono lokuxhuma ababukeli bakhe kusuka kumusho wokuqala kuye ekugcineni.
1 Izici zendaba emfushane
1.1.1 Izinombolo ezincishisiwe
1.3 Kuyinto "indaba ngaphakathi kwenye indaba"
1.4 Isitayela Discursive
2 Izinhlobo zezindaba
2.1 I-akhawunti engokoqobo
2.2 Indaba emnandi
3 Izincomo zokubhala indaba emfushane
3.1 Funda imibhalo eminingi yalolu hlobo
3.2 Ukugxila kuphela emicimbini ezolandelwa
3.3 Ukukhetha ngokucophelela izinhlamvu
3.4 Isitatimende esihleliwe samaqiniso
3.5 Isiqalo esishaqisayo, ukuvalwa okungalibaleki
3.6 Inketho Yomlandisi
3.7 Isimanga sisemininingwane
3.8 Ekugcineni, isihloko
Izici zendaba emfushane
Izimfanelo ezilandelayo zichaza indaba emfushane:
Ngokusobala, indaba emfushane ayinaso isikhala esifanayo sokuthuthukisa izincazelo zemvelo uma iqhathaniswa nezinye izinhlobo zemibhalo (njengenoveli, isibonelo). Ayikho futhi indawo yokwethula abalingiswa ngokujula futhi asikho isikhathi sokucabanga ngezisusa zabo. Ngakho-ke, ukuthuthukiswa kwendaba kuhlanganiswe kuze kufike phezulu.
Indaba emfushane ayikaze ibe nezinhlamvu ezingaphezu kwezintathu, imvamisa intambo elandisayo ithwalwa yi-monologue eyilahlayo ye-protagonist. Ngokulandelana, ku-micro-story asikho isikhathi "sokucabangisisa" imvelo noma ukuguquka okuningana esakhiweni (kungaba munye kuphela, ekugcineni).
Indaba emfushane iqala ngaphandle kokuncoma noma imininingwane "ekha phezulu"; isenzo siya ngqo ephuzwini. Ngalo mqondo, okufakiwe kwalolu hlobo lwetheksthi imvamisa kungukulindelwa komzuzu wokuvuthwa noma isigatshana esigcwele ukuphazamiseka. Eqinisweni, izindaba ezincane ezinhle kakhulu zibonakala ngokusebenzisa ngokunenzuzo nokwandisa umthelela noma umbono owenziwe ngaphambili nokuwugcina kuze kuvalwe.
Kuyinto "indaba ngaphakathi kwenye indaba"
Isimo esisemqoka sokulandisa sendaba emfushane sitholwa ngababhali ngokusebenzisa isigqi. Ngesikhathi esifanayo, ukulandelana okunamandla kwemicimbi kudinga ukulawulwa okuqondile kwenani lolwazi oludlulisiwe. Isizathu silula: inhloso ukukhuthaza umuzwa wokuthi umfundi "unombono" onelungelo lendaba elandelayo enkulu kakhulu.
Iningi lezindaba ezimfishane zilandiswa ngendlela yokukhuluma. Lokhu kubonakala ikakhulukazi ezindabeni ezincane ezibhalwe kumuntu wokuqala. Lokhu kufana nezitatimende, ukuqhuma noma imidwebo ephakeme ye-protagonist.
Njengoba igama lisho, yindaba emfushane ephefumulelwe iqiniso elingenzeka. Ngakho-ke, impikiswano yakhe iqala ngokubheka ngokucophelela imvelo ethile noma kuphenyo lwangempela. Kodwa-ke, umsebenzi wamadokhumende wangaphambilini awuphoqelekile. Enye yezindlela ezivame kakhulu zezindaba ezingokoqobo ngamaphoyisa, lapho kwethulwa khona i-anecdote kumfundi maqondana nobugebengu.
Yilezo lapho zonke izinhlobo zemicimbi engeyona eyeqiniso inendawo, (impela imicimbi engenakwenzeka kanye / noma abalingiswa baphathwa sengathi babekhona ngempela). Ngokulinganayo, kukhona izindaba ezincane ze-meta-inganekwane i-anecdotal ngokwemvelo. Lokhu kusekelwe esehlakalweni esingokomlando, yize sinesakhiwo esakhiwe ngokwengxenye noma ngokuphelele ngumlobi.
Izincomo zokubhala indaba emfushane
Funda imibhalo eminingi yalolu hlobo
Kunababhali abangenakubalwa abangamakhosi eqiniso alolu hlobo lwemibhalo, bayinkomba engcono kakhulu lapho ubhala indaba emfushane. Phakathi kwalawo magama amakhulu ngeSpanishi kukhona uSoledad Castro, UJulio Cortazar, UJorge Luis Borges, Mario Benedetti, uJulio Ardiles, uVicente Huidobro noGabriel García Márquez.
UJorge Luis Borges.
Ukugxila kuphela emicimbini ezolandelwa
Ukuba uhlobo olukhulunywayo, lukakhonkolo futhi olukhulu lokulandisa, kuyadingeka ukukhetha ngokucophelela ukuthi iziphi izindima ezinokubaluleka kweqiniso ngaphakathi kwesakhiwo. Enye yezindlela zokufika kuleli qophelo ukusuka ku-macro kuya ku-micro, into efana "nesifinyezo sesifinyezo". Ama-subplots ngokungangabazeki ashiywe ngaphandle.
Ngesikhathi esifanayo, awukwazi ukushiya okuthile okubalulekile ngoba kwenza yonke indaba ingabi nanjongo. Ngakho-ke, ukuchaza indaba emfushane enhle ibhalansi ephelele phakathi kwevolumu enkulu yolwazi - etshelwe ngejubane elihambisanayo noma eliqondakalayo - nobude obufushane kakhulu.
Ukukhetha ngokucophelela izinhlamvu
Lapho indaba emfushane inabalingiswa ababili noma abathathu, iseluleko ukuthi bahlukanise ngokucacile. Kodwa-ke - njengoba ingekho indawo yezincazelo eziningiliziwe— izici eziyinhloko kufanele zibonakale ngamagama ambalwa (okuncane kuzoba ngcono). Kulezi zimo, umehluko phakathi kwabalingiswa ungasetshenziselwa ukwenza umfundi acabange noma angabaze.
Isitatimende esihleliwe samaqiniso
Inhlangano enhle kakhulu yendaba emfushane ayiyikhululi ekukhombiseni umfundi izakhi zayo eziyisisekelo:
Kunjalo, ngayinye yalezi zingxenye zombhalo imvamisa umusho owodwa noma emibili futhi baphatha ukulandelana kwezikhathi. Ngaphandle kwalokho, ingozi yokuhlanganisa indaba engaqondakali iphezulu impela.
Isiqalo esishaqisayo, ukuvalwa okungalibaleki
Isiqalo kufanele sithathe ukunaka komfundi ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, ukungena kufanele kujabulise futhi kubambe amehlo. Ngokufanayo, i-twist yokugcina imele ithuba lokushiya umbukeli ethukile. Ukufeza yomibili le miphumela, kuyadingeka ukuhlela ngokucophelela bese ukhetha imininingwane ekhonjiswe kulayini ngamunye wombhalo.
Ngenxa yobufushane bombhalo, kunendawo kuphela yomlandeli oyedwa. Ngalo mqondo, okufaneleke kakhulu ngendaba encane ngumbalisi oyinhloko nomlandisi owazi konke. Ngaphezu kwalokho, uhlobo lombalisi luvumela imidlalo ethile enolimi encike kakhulu ekuthomeni kombhali.
UGabriel Garcia Marquez.
Yize umkhawulo olinganiselwe utholakala ukufaka imininingwane ethile, kuyalulekwa ukuthi ungenzi ngaphandle kwayo ngokuphelele. Mayelana nalokhu - futhi - ikhono lomlobi lokuba semfushane kubalulekile ukugoqa lezo zincazelo ezibalulekile ukungaguquguquki kwendaba. Futhi, lezo zinto ezibalulekile zingakhuphula amathuba akho okuthola isiphetho esihle.
Ngemuva kokubamba ngokucophelela, ukubuyekeza nokulungisa okuqukethwe… sekuyisikhathi sokunikeza umbhalo isihloko. Kuleli phuzu, iseluleko kufanele siqonde isihloko esihehayo, esithandekayo nesishukumisayo. Ngemuva kwakho konke, into eyodwa noma ezimbili ngendaba emfushane kufanele zihlale engqondweni yomfundi: isihloko nomcabango noma ukukhathazeka akwenzile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Izindaba » Izindaba ezimfishane: ziyini, izici nokuthi ungayibhala kanjani eyodwa
UGustavo Woltmann kusho
kwenza Izinyanga ze-6
I-athikili enhle kakhulu, iyisiqondisi esibaluleke kakhulu.
Phendula uGustavo Woltmann
U-Alberto Paz kusho
Ngisanda kufunda "The light of nostalgia and other stories" kaMiguel Angel Linares. Incwadi yezindaba ezimfishane, ama-aphorism nemishwana inconywe kakhulu. Inothando kakhulu futhi iyancipha. Kunconywe kulabo abathanda izindaba ezimfushane.
Phendula u-Alberto Paz
Ukuxoxisana noPatricia Pérez noJulio Santos, abadali bakaTxano no -scar